यति सम्पूर्ण कार्यहरु पर्याप्त नभएझैँ केहीले पढाइका सँगै काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि एउटा तालिका बनाएर त्यस तालिकामा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरूलाई अटाउने कार्य दुःस्वप्न बन्न पुग्दछ। र धेरै मानिसहरू वयस्क अवस्थामा परिवार र बालबच्चाका साथै खानेकुराको जोहो गर्नुपर्ने तथा बिलहरू तिर्नुपर्ने दायित्व बोकेर पनि कलेजमा भर्ना हुने निर्णय गर्दछन् । त्यसैले उनीहरूले पूर्ण समयको काम गर्नुका साथै उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि कलेजमा भर्ना हुने निर्णय गर्दछन् । तपाई जुनसुकै समूहको भए पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो अवस्थामा जीवन कति कष्टकर बन्न पुग्दछ । यदि तपाइ सफल बन्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई कुरिरहेका जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस काम र पढाईलाई कसरी सफलतापूर्वक समायोजन गर्ने सम्बन्धी टिप्सहरू पढ्नुहोस् ।
१. तपाइले विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ ।
प्रत्येक सेमेस्टर सुरु हुनु अगाडि तपाईले आफूले पालना गर्ने विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ । सर्वप्रथम, यो योजना बनाउनुस् कि त्यसले कसरी तपाईको पढाइको लेक्चर र कामको समयलाई संयोजन गर्दछ । यसका लागि तपाईलाई तपाईको रोजगारदाता तथा तपाईको सहकर्मीहरूले तपाइलाइ आवश्यक परेको समयमा कामको सिफ्ट फेरबदल गर्न सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यस कारणले यो जरुरी छ कि तपाइले काम सुरु गर्नु वा कलेजमा भर्ना हुनुपर्व तपाइको रोजगारदाता तथा भविष्यका सहकर्मीहरूलाई यो जानकारी गराउनुहोस् कि तपाइ पढ्दै हुनुहुन्छ ।
यसरी तपाईले त्यस बेला नै थाहा पाउनुहुनेछ कि के त्यो निश्चित काम र तपाईको अध्ययनलाई समायोजन गर्न सम्भव छ वा छैन । उनीहरूलाई तपाईसँग कामको सिफ्टहरू परिवर्तन गर्न वा आवश्यक परेको खण्डमा तपाईले बिदा पाउनका लागि आग्रह गर्नुहोस् । र त्यसको बदलामा तपाइ छुट्टीका दिनहरूमा काम गर्न वा उनीहरूको आवश्यकता अनुसार अन्य सर्तमा काम गरिदिने प्रस्ताव गर्नुहोस् ।
त्यसपछि सिक्न तथा कक्षाहरूमा जानका लागि योजना बनाउनुहोस् । कुन कक्षाहरू अनिवार्य छन् अनि कुन छैनन् हेर्नुहोस् र त्यसै बमोजिम योजना बनाउनुहोस् । साथै, परीक्षाको कठिनाइको बारेमा जाँच गर्नुहोस् र आफूले निल्न सक्नेभन्दा ज्यादा गाँस चपाउने हतार नगर्नुहोस् । जस्तै तीनओटा विषयको एकैचोटि अध्ययन गरेर कुनैमा पनि उत्तीर्ण नहुनुभन्दा कुनै एकमा उत्तीर्ण हुनु श्रेयष्कर हुन्छ। यदि तपाईलाई लाग्छ कि तपाइ सबैलाई समायोजन गर्न सक्नुभएको छैन भने अर्को कुनै जागिर खोज्न वा तपाइको बालबच्चा तथा अन्य कुनै आर्थिक दायित्वहरू छैनन् भने त्यसलाई नै आंशिक समयको जागिर बनाउन कोसिस गर्नुहोस् ।
२. समयको बचत गर्न सिक्नुहोस् ।
यस कार्यलाई सफलतापूर्वक गर्नका लागि तपाईलाई धेरै छोटो बाटो सर्टकटको आवश्यकता पर्नेछ । तपाईको परीक्षा तथा कलेजका जिम्मेवारीहरुलाइ सहज बनाउने कुनै पनि उपायका बारेमा सोधखोज गर्नुहोस् र अमूल्य समय जोगाउनुहोस् । जस्तोकि सामूहिक सिकाइ समूहहरू वा यस्तै केही हुनसक्दछन् जहाँ अरू विधार्थीहरुको सहयोगले तपाइ छोटो समयमा धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ ।
अनि यदि कुनै निबन्धजन्य कुराहरू लेख्नलाई तपाईलाई धेरै समय लिनेछ भने छोटो बाटोबाट अन्य कसैलाइ सो कार्य गर्न लगाउनुहोस् । इन्टरनेटमा थुप्रै भरपर्दा साइटहरू छन् जसले तपाइले खोजेको विषयमा नितान्त पृथक् लेखहरू लेखिदिनेछन् ।
तपाईले के त्यो राम्ररी लेखिनेछ वा नक्कल साबित हुनेछ भन्ने विषयमा चिन्ता लिइरहनु पर्दैन किनकि उनीहरूले दिनहुँ यस्तो गरिरहेका हुन्छन् । यो मात्र जरुरी हुन्छ कि तपाइले विश्वास गर्नु पूर्व लेख लेख्नका लागि एउटा प्रमाणित पेज पत्ता लगाउनुहोस् । भककबथकबमखष्कयच।अयm मा जानुहोस् र पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहनका लागि उत्कृष्ट तथा निष्पक्ष लेखन सेवाहरूको समीक्षा पढ्नुहोस् ।
३. आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्।
तपाई कलेजमा निकै सफल हुन तथा जागिरबाट थुप्रै धनार्जन गर्न सक्नुहुनेछ तर यदि तपाइले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु भएन भने यसको कुनै औचित्य रहने छैन । तपाईलाई दिनहरू ज्यादै लामो लाग्नका साथै कष्टकर पनि हुनेछ । तपाईसँग निकै थोरै फुर्सदको समय अनि अझ कम बिदाका दिनहरू रहनेछन् ।
यसले गर्दा तपाइले दिनहुँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । सन्तुलित भोजनहरू लिने गर्नुहोस् जसले तपाइको शरीर लाई गुणस्तरीय सूक्ष्म खाद्यतत्वहरुले पोषित गर्नेछ। बजारका तयारी तथा मिठाइजन्य अस्वस्थकर खानाहरूबाट टाढा रहनुहोस्। पानी तथा चिया पिउनुहोस् र चिसोजन्य सोडा र मादक पदार्थहरू त्याग्नुहोस् ।
भिटामिनजन्य तथा खनिजजन्य परिपूरक खानाहरूको आहार गर्नुहोस् । यसका साथै आफूलाई पर्याप्त रूपमा सुत्नुहोस् । यदि बिहान सबेरै उठ्नुपर्ने छ भने बेलुका चाँडो गरी सुत्ने गर्नुहोस्। रातभर टेलिभिजन कार्यक्रम हेरेर दिनभर थकित नरहनुहोस् । तपाइको शरीर लाई यस जीवन प्रक्रियाहरूलाई नियमित गर्न तपाइलाई एउटा लयको आवश्यकता पर्दछ ।
४. आधुनिक प्रविधिहरूको फाइदा लिनुहोस्।
हाम्रो वरपर रहेका सम्पूर्ण प्रविधिहरूको फाइदा लिने गर्नुहोस् । हामी सबैसँग एउटा स्मार्टफोन, ट्याब्लेट तथा ल्यापटप हुन्छ । यिनीहरुलाई अनलाइन पढाइका लागि प्रयोग गर्नुहोस् जुन क्तगमथmष्लमका अनुसार सिकाइका प्रभावकारी तरिकाहरूमध्ये एक हो । तपाईलाई यसमा सहायता गर्ने थुप्रै एप्लिेकेसनहरु पनि छन् । साथै थप रूपमा प्राध्यापकहरूले आफ्ना कक्षाहरू अनलाइनमा राखिरहेका छन् जसले गर्दा कहिलेकाहीँ तपाइले समय बर्बाद गर्नुपर्ने छैन र कक्षाहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन । तपाई कसैलाई तपाईका निमित्त कक्षाहरू रेकर्ड गर्न लगाएर त्यसलाई घरमा सुन्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा समयकोनिकै नै बचत हुनेछ ।
टिपोटहरू लेख्नुहोस् र अन्य सबैलाई पनि क्लाउडमा जम्मा गर्नुहोस् किनकि यसबाट मात्र यिनीहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहनेछन् । खुसीसाथ भन्नुपर्दा आज हामी आधुनिक युगमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ सम्पूर्ण कुराहरू नेटमा उपलब्ध छन्, हामीले मात्र खोज गरे पुग्दछ । तपाइले यस्तो वेब साइटहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ जसले लेखहरूमा तथा अन्य विद्यार्थीका जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नमा सहायता गर्दछन् । तपाइले मात्र हात चलाउनुपर्नेछ सबै कुराहरू तपाइको औँलाको टुप्पाबाट हुन सक्छन् ।
प्रविधिको प्रयोग यत्तिमा मात्र सीमित छैन । अनलाइनमा नै गर्न सकिने कामहरूको खोजी गर्नुहोस् जसले अझ बढी समयको बचत गर्नेछ । यस्ता थुप्रै राम्रो कमाइ हुने फ्रिल्यान्सका कामहरू पनि छन् जुन तपाइको आफ्नो घरबाटै सहज रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ र आफू कति काम गर्ने निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ । यो अहिलेसम्म विधार्थीहरुको लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ ।
५. आरामको क्षेत्र कम्फर्ट जोन पत्ता लगाउनुहोस्।
सुरुमा यो गाह्रो हुनसक्दछ । तर, समयसँगै तपाइले आफ्नो आरामको क्षेत्र पत्ता लगाउनु पर्दछ । यसबाट मात्र तपाईले आफूले चाहेँका सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । कुनै पनि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असरहरू बिना लामो समयसम्म आफ्नो आरामको क्षेत्रबाट टाढा रहन सक्दैन। त्यसैले, सुरुका केही महिनाहरू आफूलाई अभ्यस्त हुनका लागि दिनुहोस् र आफूलाई के सही हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् । त्यसपछि तपाइ खुसीसाथ आफूले पालना गर्ने एउटा तालिका बनाउन सक्षम हुनुहुनेछ ।
हामी विश्वस्त छौ यो टिप्सहरूको पालना गर्नुभयो भने तपाई काम तथा पढाइलाई समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ । यो सजिलो नभए तापनि एकदमै सम्भव छ र अन्त्यमा तपाईको सम्पूर्ण त्यागहरूको लायक हुनेछ ।
त्यसै गरी तपाई बेलायतमा अध्ययन गरी रहनु भएको छ र आफ्नो बचतको केही हिस्सा नेपाल मा रहनु भएका आफ्ना परिवार तथा आफन्तजनलाई पठाउन चाहनु हुन्छ भने बेलायतको रेमिट्यान्स अपरेटर मनिटुबाट स्थानान्तरण गर्न सक्नु हुनेछ जसको लागि गुगल प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गई मनिटु एप्स डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यस्तै मनिटुको वेबसाइट www.moneyto.co.uk/nepal वेब ब्राउजर को माध्यम बाट पनि पठाउन सक्नु हुने छ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर ०२०८१५८५०९८ मा सम्पर्क गर्नुहोस।